अमिताभ बच्चन – ताजा समाचार
मुम्बइ। बलिउडका दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । पछिल्लो चार दिनदेखि मुम्बईको नानावती अस्पतालमा भर्ना भएका बच्चनलाई शुक्रबार साँझ अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको हो । नियमित चेकअप भन्दै उनलाई मंगलबार बिहान ३ बजे अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि उनलाई लिन पत्नी जया र छोरा अभिषेक पुगेका थिए । अमिताभलाई नानावती […]
काठमाडौं । बलिउडमा महानायक भनेर चर्चा पाएर अमिताभ बच्चन गएको ३ दिनदेखि अस्पतालमैं हुनुहुन्छ । उहाँको कलेजोमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको परिवारले जानकारी दिएको छ । अमिताभ आफैंले धेरैपटक भनेको कुरा के हो भने उहाँको कलेजोले १०० मा २५ प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको छ । तर ३ दिनको अस्पताल भर्नासँगै अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा […]
मुम्बइ। बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन विगत ३ दिनदेखि मुम्बइको नानावती अस्पतालमा भर्ना छन् । बताइएअनुसार उनलाई मंगलबार राती ३ बजे नियमित चेकजाँचको लागि भन्दै अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । उनलाई अस्पतालमा अझै १–२ दिन लाग्न सक्ने बताइएको छ । उनलाई आइतबार डिस्चार्ज गरिने सम्भावना भएको भारतीय मिडियाले दावी गरेका छन् । अमिताभलाई नानावती अस्पतालमा जहाँ […]
महानायक अमिताभ बच्चन अस्पताल भर्ना, लिभर क्यान्सरबाट ग्रसित
बलिउड महानायक अमिताभ बच्चन अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनी मुम्बईको नानावती अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । बच्चन रुटिन चेकअपका लागि मंगलबार अस्पताल भर्ना भएका हुन् । सन २०१२ मा पनि उनी सर्जरीका लागि १२ दिनका लागि अस्पताल भर्ना भएका थिए । बच्चन लिभर क्यान्सरबाट ग्रसित छन् । उनलाई सन १९८२ फिल्म कुलीको सुटिङका क्रममा […]
एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कानलाई अमिताभ बच्चनको सन्देश (भिडियोसहित)
बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चनले मुस्कान खातुनलाई एक भिडियो सन्देश पठाउँदै उनीमाथि गलत भएको बताएका छन्। गत भदौकोतेस्रो साता १४ वर्षे मुस्कानलाई वीरगन्जमा विद्यालय जाने क्रममा दुई युवकले ए,सिड प्र,हार गरी घाइते बनाएका थिए। ‘उज्वलजीले तपाईंको रेखदेख गरिरहनु भएको छ । म आशा गर्छु उहाँको रेखदेखले तपाईं धेरै छिटो ठिक हुनुहुनेछ,’ अभिताभ बच्चनले ४५ सेकेन्ड लामो […]
जान्नुहोस् बलिउडका यी चर्चित २० सेलिब्रेटीको वास्तविक नाम
एजेन्सी । आफ्नो नाम मन नपरेर, नाम नफापेर वा अन्य कारणले कलाकारहरु वास्तिवक नामबाट नभई उपनामबाट चिनिने गरेका छन् । यो चलन नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरी नै छ । यहाँ हामीले चर्चित २० बलिउड सेलिब्रेटीको वास्तविक नामको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं । १. सलमान खान वास्तविक नामः अब्दुल रशिद सलिम सलमान खान २. अमिताभ […]
‘बच्चनको नाम खराब गरिरहेका छौ, अभिनय छोडिदेऊ’ भन्दै अभिषेकलाइ एक महिलाले थप्पड हानेपछि …
अभिनेता अभिषेक बच्चनले सन् २००० मा फिल्म ‘रिफ्युजी’ बाट बलिउडमा डेब्यू गरेका हुन्। त्यसपछि उनले लगभग १५ वटा फिल्मका काम गरे तर सबै फिल्म फ्लप भए। डेब्यू गरेको चार वर्षपछि फिल्म ‘धुम’ हिट भयो। जसले अभिषेकलाई पहिचान दियो। फिल्म क्षेत्रमा आउनुअघि अभिषेक बुबा अमिताभ बच्चनको कम्पनी एबीसीएलमा ड्राइभरको काम गर्थे। एक अन्तर्वार्तामा उनले यो कुरा […]
भारतीय मिडियामा महानायक राजेश हमालको चर्चा, अमिताभ बच्चनसँग तुलना
एजेन्सी। भारतीय संचार माध्यमले नेपालका महाननायक राजेश हमाललाई बलिउडका चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चनसँग तुलना गरेको छ। भारतीय संचारमाध्यम आजतकले महानायक हमालको बारेमा प्रकाशन गरेको एक लेखमा उनलाई अमिताभ बच्चनसँग तुलना गरिएको हो। आजतकमा ‘ये हैं नेपाली सिनेमा के अमिताभ बच्चन’ शीर्षकमा लेख लेखिएको छ। भारतमा संचालन हुँदै आएको ‘कौन बनेगा करोडपति’लाई अमिताभ बच्चनले संचालन गर्दै […]
यी २० चर्चित कलाकारको असली नाम खुल्यो : अमिताभ र सलमानको सुन्दा दुनियाँ चकित
काठमाडौं । अहिले उपनाम राख्नु एक प्रकारको फेशनजस्तै भएको छ । यो नामले राजनीति र कलाकारितासँगै अन्य क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुलाई पनि लाभ दिन्छ । आज हामी विश्वको सबैभन्दा ठुलो चलचित्र उद्योगहरुमा आउँने बलिउडका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं । उसै पनि कलाकारले रियल जिन्दगी भन्दा धेरै रिलको जीवन बाच्ने गर्दछ । यसकारण पनि उनीहरु आफ्नो […]
अमिताभले भन्दा धेरै पैसा लिने यी हुन् दक्षिण भारतीय हिरो
नेपालमा दक्षिण भारतीय फिल्मका निकै धेरै फ्यानहरु रहेका छन् । दक्षिण भारतीय कुनै पनि नयाँ फिल्म युट्युबमा अपलोड भयो भने त्यो ट्रेन्डिङमा परिहाल्छ । यसअर्थ पनि नेपालमा दक्षिण भारतीय फिल्मलाई पछ्याउनेको संख्या ठूलो छ भन्दा फरक पर्दैन । मूलधारको भारतीय फिल्म उद्योगका धेरै कलाकारलाई नेपाली फ्यानहरुले चिन्ने र उनीहरुबारे चासो राख्ने गरेका छन् । जसमध्येका […]